Injiilka Ciise | Gospel in Somali
You are here: Home / Injiilka Ciise | Gospel in SomaliInjiilka Ciise | Gospel in Somali
– Fadlan akhri soo socda
Bilowgii Ilaah samada iyo dhulkuu abuuray
Ciise ayaa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii kasta oo dembi sameeyaa waa addoonkii dembiga.
Ilaah wuu ina abuuray, laakiin garan mayno isaga iyo kala soocan yihiin isaga sababtoo ah dabeecadda nagu dembi miidhan. Noloshooda Our Ilaah oo aan lahayn macnaha iyo ujeedada lahayn. Natiijo ah (qiimaha u bixin) ee naga dembigu waa dhimashada, labada ruux ahaaneed iyo jidh ahaaneed. Yahay dhimashada ruuxa lagu soocaa Ilaah. Dhimashada jidh ahaaneed waa hallaabay ee jidhka. Haddii aan ku dhinta dembigayaga, waxaana in la weligii kala maqan doonaa Ilaah ka yimid oo ilaa cadaabta. Sidee ayaynu nafteena badbaadin karaa dembiyadeenna inaga soo celi Ilaah? Waxaan isma badbaadin karo nafteena, sababtoo ah ma waxaa suuragal ah in qof dembi leh inuu badbaadiyo (sida qof qaraqmeen qudhiisa isma badbaadin karo). Midkoodna ma dadka kale na badbaadi karaa, sababtoo ah dhammaan naga mid ah dembi badan (hal qof hafashada isma badbaadin karo qof kale hafashada, labada baahan yahay caawimo). Waxaan u baahan nahay la mid yahay mid dembi la’aan (ma qaraqmeen) si ay naga badbaadi dembiyadayada. Kaliya qof aan dembi lahayn buu noo badbaadin karo. Sida loo helo qof aan dembi lahayn ee dunida dembi halkaas oo dhammaan way wada dembaabeen?
Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix. Yooxanaa 3:16
Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Matayos 1:23
Gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta,
Wuxuu ku yidhi iyaga, Idinku waxaad tihiin kuwa hoosta, aniguse waxaan ka mid ahay kuwa sare. Idinku waxaad tihiin kuwa dunidan, aniguse mid kama ihi kuwa dunidan
Waxaa samooyinka ka yimid cod leh, Adigu waxaad tahay Wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay.
Sidaas aawadeed haddii Wiilku idin xoreeyo, runtii xor baad ahaan doontaan Yooxanaa 3:3
Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu mar kale dhalan, boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Yooxanaa 1:12
Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay, Ilaah, Ilaah waa kan ina abuuray oo naga jecel yahay si weyn, na siiyey xalka. Out of jacaylkiisa aad u weyn inoo ah ayuu u soo diray Wiilkiisa u gaar ah, Ciise, inuu dhinto dembiyadeenna aawadood. Ciise waa dembi lahayn, sababtoo ah wuxuu aha mid ka soo dunida, iyo, halka dhulka, ka adkaaday inaydnaan jirrabaadda gelin Ibliisku ee ku dembaajiyey. Noloshiisa oo Ilaah ka farxiyey jannada ku jira. Ciise qaaday dembiyadeennii iyo ku dhintay iskutallaabta dusheeda, dembiyadayada. Isagu waa badbaadiyaha nolosheena (Ciise waa awoodaa inuu naga badbaadiyo maxaa yeelay, wuxuu ahaa qaraqmeen). Ujeedada Ciise dhimanayaan on iskutallaabta waa inuu iska bixiyo qiimaha uu dembiyadeenna iyo, sidaa darteed, ka saar dembiyadeenna inaga naga soo celiyaan xiriirka naga jabi Ilaah. Waxaan ka iman nool dhimasho ka ruuxiga ah (separation ka timaada Ilaaha) ilaa iyo xoogga Ilaah. Tani xidhiidhkan cusub waxaa lagu magacaaba mar kale ku dhashay. Tani waxay noo soo celiyaa ujeeddada loo abuuray jiritaanka iyo, ina siinayaa macnaha dhabta ah iyo ujeedada loogu talagalay ku nool.
Ciise ayaa ku yidhi, Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa. Rooma 6:9
Waynu og nahay in Masiixa oo kuwii dhintay ka sara kacay uusan mar dambe dhimanayn; dhimashadu mar dambe u talin mayso.
Isaga Ilaah baa sara kiciyey, oo ka furfuray xanuunkii dhimashada, maxaa yeelay, dhimashadu ma xajin karin.
Waayo, sababtaasaa Masiixu u dhintay, una soo noolaaday inuu Rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba Falimaha Rasuullada 1:11
Waa maxay caddaynta in allabarigii Ciise dhimanayaan, dembiyadayada Ilaah waa aqbalay samada ku jira? Cadayn waa sarakicidda Ciise dhimasho ka by Ilaah. By sarakicidda, waxaa ku tijaabiyey in Ciise ayaa looga gudbi dhimasho (ama, in si kale loo dhigo, dhimasho ma laha awood isaga ka weyn). Haddaba, sidaa darteed, waayo, Ciise ku nool yahay, waxa kale oo aanu ku noolaan karaan. Noloshiisa oo naga ee na siiya nolosha. Sidoo kale, maxaa yeelay, wuxuu soo Bixin, wuxuu nool yahay maanta.
Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii ereygayga maqla oo rumaysta kii i soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, xukunna geli maayo, laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay.
Waxaan ahay illinka, haddii qof uun xaggayga ka soo galo, wuu badbaadi doonaa, wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli doonaa.
Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee.
Haddaba waxaan idinku idhi, Dembiyadiinna waad ku dhiman doontaan, waayo, haddaydnan rumaysan inaan isagii ahay, dembiyadiinna ayaad ku dhiman doontaan.
Falimaha Rasuullada 4:12
Mid kale badbaadada lagama helo, maxaa yeelay, ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno.
Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa.
Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii rumaysta isaga, ceeboobi maayo.
maxaa yeelay, Ilaah dadka uma kala eexdo.
Maxaa yeelay, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa,
Sidee dembiyadeenna inaga waxaa laga saari karaa oo aan helno nolol cusub? By rumaysan sida Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix. Haddii aan ka toobad keenin siyaabo noo dembi miidhan oo wac Ciise kor ku cafiyo iyo badbaadin na, wuxuu u samayn doonaa. Ciise yahay Wiilka Ilaah oo u timid si ay dunida si ay u dhintaan, dembiyadayada. Qof kasta oo dhulka kii isaga isku halleeya oo denbi dhaaf ka yimid Ilaah heli doonaan, waa la badbaadin dembiyadooda ka (iyo cadaabta) oo ka yimid Ilaah hesho nolol cusub. Ilaah wuxuu muujinayaa dadka uma kala eexdo. Waxa uu aha mid ay saameeyeen – ee gobolka ku nool nahay, luqada aynu ka hadalno, hodan yihiin ama faqiir, rag ama dumar, yar iyo waayeelka, ama wax kasta oo kala duwan kale oo jirka. Qof kasta oo u rumaysan oo aanay qiran Ciise badbaadi doonaa. Kuwa soo socda waa duco in aad ku tukatid karto haddii aad go’aansato in aad raacdo Ciise:
Ilaahoo jannada ku jira, Waad ku mahadsan tahaydirayaWiilkaYourkaliya, Ciise, si ayu dhintaanwaayo, dembiyadeediimyaanla keydshoiyoleeyihiinnoloshacusub eeka yimid xagga jannada. Waxaan utoobad keenaan, jidadkayga oo ahwaxayna u dambidhaaf warsandembigeenna. Waxaan rumaysanahayinCiiseiyoCiiseheshosidaaanRabbigeenna ah Badbaadiyeheenna. I caawiiyohagoigain ay ku noolaadaannolol laga raalli yahayin aadin thisnoloshacusub ee aadi siin. Aamiin
Haddii aad sameysay salaada kor ku xusan, weydii Ilaah si uu kuu tuso kaniisad si ay u tagaan. La hadal Ilaah tukasho si joogto ah oo Ilaah ku hadli doonaa in aad. Dhegayso codka Ilaah. Ilaah ayaa kugu hagi doona. Waxa uu aad u jecel yahay iyo qaadan doonaa daryeelka aad ee. Waxaad u aamini karaan isaga oo ku. Waxa uu weligii ma idlaado kuwa isaga isku halleeya oo. Ilaah waa Ilaah oo wanaagsan. Wuxuu lagu kalsoonaan karo. Waxaad ku xirnaan kartaa isaga ku saabsan, waayo noloshaada. Soo qaado baahidaada isaga hor. Isagu dan buu idinka iyo aad ugu barakayn doonaa. Oo Ilaah wuxuu yidhi, ‘Waxaan marna aad ka tagto doono, mana idinka tegi’. Hallayn Ilaah. Oo waxaa barakaysnaan xagga Ciise.
Read Kitaabka Quduuska ah si joogto ah, laga bilaabo kitaabkii Yooxanaa. Wixii khayraadka internet ka badan, halkan riix.